LIDL RIPOFFS တွေဟာအရှက်ကင်းမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာမူလအမှတ်တံဆိပ်ကိုတောင်းပန်သင့်ပါတယ် - သတင်း
Lidl ripoffs တွေဟာအရှက်ကင်းမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာမူလအမှတ်တံဆိပ်ကိုတောင်းပန်သင့်ပါတယ်
Ah Lidl, Manuka Honey နှင့်ဥယျာဉ်တစ်ခုသည်အိမ်ခေါင်မိုးတစ်ခုတွင်သင်မည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်နိုင်မည်နည်း။ ဒါဟာဝေးအားဖြင့်တိုင်းပြည်အတွင်း roguest စူပါမားကတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယုတ္တိမရှိသောပန်းချီကားမရှိပါ - ရွှေနှင့်အရသာရှိပန်းသီးများနှင့်ကပ်ထားသောပိုးသတ်ဆေးနှင့်ဆံပင်အခြောက်ခံသူများနှင့်အဖုံးများဖုံးအုပ်ထားသောဘေးတွင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဤနေရာသည်ကိတ်မုန့်သည်နိုက်ဂျီလာလောဆန်ထက်နိမ့်ကျသောကတ်ရ်ှမီးယားတွင်အနံ့ခံသောနေရာဖြစ်သည်။ ငွေရှင်းကောင်တာမှအမျိုးသမီးများသည်အလွန်လျင်မြန်စွာ ဖြစ်၍ သင်သည် tills များကိုမထိမီသင်ကိုယ်တိုင် psyche ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ် Janine သည် Crunchy Corner ကိုသင့်မျက်လုံးထဲသို့ကျရောက်စေနိုင်သည်။
သို့သော် Lidl ၏နေအောက်ရှိအမှတ်တံဆိပ်မှန်သမျှကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသောအရာမရှိပါ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှအခွန်ထမ်းသည် Bixies အား Weetabix အတွက်မှားယွင်းသည်ဟုထင်ကြသလား။ ငါမသိ, ဒါပေမယ့်ငါကဒီမှာကဒီမှာဖြစ်၏သေးငယ်တဲ့ af ကြောင့်ငါကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် bargain ချစ်သောကြောင့်။
ငါ Batts လို့ထင်တဲ့တစ်ယောက်တည်း Nando's နဲ့မတူဘဲသံသယဝင်နေတာလား။
Batts ကလိမ္မော်ရောင်ထုပ်ပိုးမှုအတွက်အကြံဥာဏ်ဘယ်ကရတာလဲ။ အကယ်၍ Lidl ကတစ်ခုခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူကနာမည်ကြီးတံဆိပ်ဖြစ်သင့်သည်။ Batts ကသင်ဘေကွန်ဘွတ်ပေါ်ညှစ်နေတဲ့အညိုရောင်ငံပြာရည်ရဲ့နာမနဲ့တူတယ်။
ကြောင် meme ဇာစ်မြစ်မှာအော်ဟစ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး
ဘယ်သူကပိုကောင်းတာလဲ - Malt Wheaties or Shreddies?
Crownfield Malt Wheaties obvi ။
မဟုတ်ပါ၊ သင်မှန်တယ်၊ Bixies သည် Weetabix ကဲ့သို့သောအသံနှင့်တူသည်မဟုတ်ပါ
Neo? Oreo? Lidl ၏တီထွင်ဆန်းသစ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့က 'ကောင်းပြီ'
Twister မင်းရဲ့တရားဝင်ဌာနကဘာလဲ။ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကမင်းကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီ
အဘယ်သူမျှမက Maccys ကနေ 12 ကြက် nugget box ကိုမဟုတျပါဘူး, သင် Lidl ကနေဒီမကောင်းတဲ့ကောင်လေးဝယ်နိုင်ပါတယ်
ဤတွင် Lidl Jordans ၏ကျေးလက် Manor ဗေဒကိုအပြည့်အဝဆေးကြောနေသည်
Tbf Lidl သည်အလွန်ဈေးကြီးသော၊ အလွန်ဈေးကြီးသော muesli များကိုလူကြိုက်များအောင်ပြုလုပ်နေသည်။ များစွာသောသူတို့အဘို့အနည်းငယ်သာ။
မင်းရဲ့ Pasta ကို Sauce ရှိ Pasta သို့မဟုတ် Pasta 'n' ငံပြာရည်ကိုပိုနှစ်သက်ပါသလား။
အကြောင်းမှာ 'in' သည် Lidl ကို Batchelors ™မှတရားစွဲဆိုခြင်းကိုတားဆီးသောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။
W5 သည် Cillit Bang ၏အရောင်များကိုမူပိုင်ခွင့်မူပိုင်ခွင့်အနေဖြင့်မပြုလုပ်တော့ပါ
ဟဲဒီမှာ Alfredo ရဲ့ Stonebaked ပီဇာဒေါက်တာ Oetker ကသူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြန်ရချင်ပါတယ်
Lidl ၏လက်ငင်းခေါက်ဆွဲများသည် Super Noodles ၏တည်ရှိပြီးသားဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသည်
အနည်းဆုံး Lidl ကထုပ်တစ်လုံးအစားဇွန်းတစ်ချောင်းကိုထုပ်ပိုးလိုက်တယ်။ ဒါကကွဲပြားခြားနားစေသည်?
ကောင်းပြီကောင်းပြီဒီနေရာမှာ Lidl ဟာအခုချက်ချင်းပဲတရားဝင် Jaffa Cake အမှတ်တံဆိပ်နာမည်ကိုယူလိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့သူတို့မှာသေတ္တာထဲမှာ ၂၄ ရှိတယ်၊ ၃၉ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေပဲ။
ဂျာမန်စကားလုံးကိုထည့်ပါ၊ ဗြိတိန်သားများသည်ခြားနားချက်ကိုမပြောနိုင်ပါ။ *
ပြီးတော့ငါတို့မှာ Woodgate ရှိတယ်၊ Strongbow ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဒီပန်းသီး cider လိုပဲကူးယူထားတယ်၊
Lidl ၏ Finton ၏ပုံပန်းသဏ္Gordာန်သည် Gordon နှင့်ဆင်တူသည်
ဒါ့အပြင် Captain Cook ကလည်း Capture Morgan ရဲ့ရမ်ကိုသာမကမွှေးရနံ့ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပါတယ်
Lidl ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Cien ရှိတယ် တစ် ဦး ဝိသေသလက္ခဏာအကျပ်အတည်းမှတဆင့်
Cien သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်ရှစ်ခုရှိသည်ဟုဟန်ဆောင်နေပြီး၎င်းသည်မည်သူဖြစ်လိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေသည်။
ဒါမှမဟုတ် TRESEME လား
ဒါမှမဟုတ် Radox လား။
သို့မဟုတ်အရာအားလုံးထဲမှာ Cien ကိုနည်းနည်းရှိပါသလား
နောက်ဆုံးတော့ Towergate ဘီစကစ်တွေရှိတယ်၊ သူတို့လိုင်းတစ်ခုလုံးခိုးယူမှုအတွက် McVities ကိုအခုချက်ချင်းတောင်းပန်သင့်တယ်
လုံးဝရက်စက်။ Lidl ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်0င် fuck ဆိုတဲ့ပေးသည်။
လူတိုင်းအသုံးပြုသော 'Big Face' filter ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း
အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက် rom-coms ကဲ့သို့သောသိပ္ပံနည်းကျအကြောင်းပြချက်ရှိသည်
လီဗာပူးလ်အသင်း၏ Echo Arena တွင်နာမည်အသစ်ရှိပြီး 2019 တွင်သင်ကြားရမည့်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်
မင်းရဲ့ Uni ဘယ်ဂိမ်းအမျိုးအစား?
ဤ 43 Too Hot To Handle memes တွေဟာ Lana ကသူတို့ကိုအစိမ်းရောင်အလင်းပေးတာကောင်းတယ်
ငါ 'အမျိုးသမီးကဲ့သို့စား' 'ဖို့အစားအစာလွန်း
ဤရွေ့ကား 31 memes Capitol Hill မှာပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်ရဲ့ပရမ်းပတာ၏တစ်ခုတည်းသောရယ်စရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ယေရှု၏ကျောင်းသားများသည် 'မည်သည့်ပိုစတာ၊ အလံသို့မဟုတ်အလံမဆို' ပြသခြင်းကိုနှင်ထုတ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်